Iipleyiti zeBambo zooBantwana ezigqibelele -Umvelisi kunye neFektri yoLuhlaza | Uqalo olude
[Uqalo lwendalo]:Ibhodi yabantwana be-bamboo yenziwe nge-bamboo yendalo eyi-100%, kwaye ipateni kwipleyiti ibhalwe i-laser. Ayinayo i-BPA, ayinayo iplastiki okanye i-melamine, kwaye ayiqulathanga naziphi na iikhemikhali eziyingozi.
[Uqalo lwendalo]: Ibhodi yethu yoqalo yabantwana yenziwe nge-bamboo yendalo eyi-100%, kwaye ipateni kwipleyiti ibhalwe i-laser. Ayinayo i-BPA, ayinayo iplastiki okanye i-melamine, kwaye ayiqulathanga naziphi na iikhemikhali eziyingozi.
[Uyilo lwentloko yekati]: Uyilo lobume beentloko zekati lunomdla ngakumbi, luvumela abantwana ukuba bathande ukutya kwaye bafunde ukutya ngokwabo, ke olu hlobo lwe-tableware lulunge kakhulu kubantwana abaneminyaka eyi-1-5 abaqala ukufunda ukutya nokutya bodwa.
[Ingqondo egqibeleleyo yokutya ngokwakho kunye notshintsho]-Izinto ezifanelekileyo uqeqesho lwabantu abatya ngokuzimeleyo okanye abafuna ukutya. Ukunciphisa uxinzelelo kunye nokudala indawo ekhululekile necocekileyo yabazali kunye nabantwana abancinci. Awuyi kushiya ivumba kunye nombala wokutya.
[Kulula ukuyicoca]: Umphezulu weplate ugudile kwaye kulula ukuwucoca, kwaye neetchup inokucinywa ngokuthe ngqo. Ungasebenzisa ilaphu lesitya ukuhlamba izitya zabantwana emanzini anesepha, kuba azilungelanga ii-oveni, ii-microwaves okanye izitya zokuhlamba izitya. Kufuneka kuqatshelwe ukuba, nceda uhlambe ibhodi yoqalo lwabantwana ngexesha emva kokuyisebenzisa. Musa ukufunxa isitya se-bamboo ixesha elide. Emva kokuhlamba, zibeke kwindawo engena umoya ukuze wome.
Ubungakanani 235 * 190 * 16
Ubungakanani beCarton 245 * 200 * 21
Iyalayisha I-12PCS / CNT
Ubunzima bokuqala Malunga ne-0.25kg
Ingabamba iintlobo zokutya ezahlukeneyo, ezinjengezo zonke iintlobo zerayisi, ii-noodles, iidizethi, iziqhamo, iziqholo, njl.njl.
Ayilungelanga kuphela iintsana ezifundela ukutya ekhaya, kodwa ikwazile ukuzisa iipleyiti zoqalo ukuze zisetyenziswe xa zisitya ngaphandle. Umntwana mdala ngokwaneleyo ukuba angasetyenziswa njengesitya esiqhelekileyo sokutya. Inganikwa njengesipho kubahlobo bakho kunye nosapho, lukhetho olufanelekileyo.
Egqithileyo Itreyi yes bamboo isikwere ilungele abantwana kunye nabantu abadala ukuba batye kwaye inokusetyenziswa kwakhona
Okulandelayo: Ipleyiti yokutya yabantwana yomvundla enokusetyenziselwa ukutya
Itreyi yoqalo-Ilunge ngokutya nesiselo
Itreyi yoqalo lwesikwere ilungele abantwana ...
Uhlobo loKhuseleko lweNdawo yoKhuseleko lweNdalo
Umbala we-bamboo oxande wetreyi ungenziwa ngemfuneko
Indebe yetreyini yendalo yetya yokutya enokutya ...